Ukuncipha yihlaya elisha le-Apple TV + elivela kubadali bakaTed Lasso | Izindaba ze-IPhone
Ukuncipha yihlaya elisha le-Apple TV + elivela kubadali bakaTed Lasso
Ku-Apple TV + bafuna ukusebenzisa kahle impumelelo yesizini yokuqala yamahlaya I-Ted lasso futhi kubonakala sengathi uyaqiniseka ngokubheja ngalolu hlobo. I-Apple imemezele ukuthi ifinyelele esivumelwaneni esisha noBill Lawrence (omunye wabadali bakaTed Lass0), okuzoba ukusebenzisana kwesithathu, khipha amahlaya amasha osihloko sithi Uyacwilisa.
Kulamahlaya amasha, naye uzobamba iqhaza UBrett goldstein (owaziwa njengoRoy Kent ochungechungeni I-Ted lasso) Futhi kuzoba njalo Kudlala uJason Segel, owaziwa kakhulu ngendima yakhe emdlalweni wamahlaya i-How I Met Your Mother.
UJason Segel udlala i- umelaphi owephula nabasunguliwe futhi utshela amakhasimende akho ukuthi ucabangani ngempela okubangela isiphithiphithi.
Lokhu ngeke kube ukusebenzisana kokuqala kukaJason Segel ne-Apple TV +, njengoba kuyingxenye yabalingisi befilimu Isibhakabhaka Sikuyo Yonke Indawo eyenziwe yi-Apple Studios futhi isuselwa kunovelda enegama elifanayo ebhalwe nguJandy Nelson.
Emsebenzini we ukukhiqizwa nombhalo NguJason Segel, uBill Lawrence noBrett Goldstein. Ngokuphumelela kwalaba ababili bokugcina ngochungechunge lweTed Lasso, singasho ukuthi impumelelo yalo mdlalo wamahlaya iqinisekisiwe impela.
UBill Lawrence unenkontileka noWarner Bros manje axoxisanayo kabusha. Okwamanje kubonakala I-Apple ikunikeza imikhono ebanzi yawo wonke amaphrojekthi akho ngakho-ke ngeke kumangaze ukuthi esikhundleni sokuqhubeka nokusebenza noWarner Bros, wayosebenzela i-Apple TV + kuphela.
Ngaphezu kukaTed Lasso noShrinking, uBill Lawrence usebenza ochungechungeni Inkawu embi, uchungechunge lokwaziwa kuphela njenge- pKudlala uVince Vaughn.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Imikhiqizo ye-Apple » I-Apple tv » Ukuncipha yihlaya elisha le-Apple TV + elivela kubadali bakaTed Lasso
Ukushaja ngokushesha i-Apple Watch Series 7 ngamashaja ahambisana nephrothokholi ye-USB Power Delivery noma eye-Apple